कसैलाई सबै गर्भावस्थाको रक्तपातपूर्ण विनियोजन गरिएको थियो
केटीहरू, अर्को दिन पछि परीक्षण पारित गरियो। डेला "फ्र्रिट", बिहान ओक्सुला को वडानुल्ला उनले एउटा पट्टी देखाए, यहाँ दोस्रोमा पनि स h ्केत पनि थिएन। म दु: खी थिए, त्यसैले बाबिक चाहन्थे, यो अनलाइन टेस्ट गरे, उनले देखाए कि म perferent %% सम्भाव्यताका साथ गर्भवती भएर गर्थे, तिनीहरू भैरहेको छ कि भ्रूण4हप्ता हो ! त्यहाँ कुनै भाग्य सीमा थिएन, त्यसैले शान्त परिक्षण, म तपाईंलाई पारित गर्न सल्लाह दिन्छु, यो HCG मा अधिक सही स्ट्रिपहरू हुन को लागी भयो !
महिलाले गर्भावस्थाको बारेमा सिकेकी छिन, ध्यानपूर्वक आफ्नो स्वास्थ्यको राज्यसँग सम्बन्धित छ। कुनै पनि संदिग्ध संकेतहरू प्रायः गर्भपातको खतराको रूपमा बुझिन्छ। विशेष चिन्ता अदृश्य समय हो।
गुलाबी चयन को उपस्थिति को कारण
, जो बच्चालाई नहेर्खाले देखा पर्यो, सचेत र भविष्यमा आमालाई माया गर्न सक्दछ। स्थितिमा रहेका धेरै महिलाहरू यस लक्षणको सम्भावित कारणहरू र नतिजा बारे थाहा छैन। यो घटनाहरू सँधै शरीरमा खराबीको सूचक हुँदैन वा गर्भपात गर्ने खतरा हुँदैन।
सामान्यतया केटीहरू जसले आफ्नो पोषण पछ्याउँछन् र त्यस्ता समस्याहरूको जीवनशैली हुँदैन। प्रेसर रक्तस्राव गहन शारीरिक श्रम वा यौन जीवनमा प्रतिबन्ध वेवास्ता गर्न सक्छ। स्थायी तनाव र कडा परिश्रमले अक्सर गेस्टेशन अवधिको प्रारम्भिक चरणमा बच्चाको घाटामा पुर्याउँछ।
गुलाबी सिलहरू जुन अनियमित रूपमा देखा पर्दछ - डाक्टरको सल्लाह लिने र उनीहरूको बानीको दिन, दिनको दिन, दिनको दिन, दिनको दिन, दिनको दिन, दिन र आहारको दिन। मुख्य कारकहरूलाई जुन प्रारम्भिक गर्भावस्थाको समयमा गुन्कीटिश डिस्चार्जलाई अभिवृद्धि गर्न सक्दछ।
भिटामिन बी र फोलिक एसिडमा धनी उत्पादनहरू, पर्याप्त मात्रामा गर्भवती महिलाको आहारमा भिटामिन महिलाको खानामा। Aviteaninosiss चेतावनी गर्न को लागी, ट्याब्लेट फारममा ट्रेस एलिमेन्ट को कोर्स आपूर्ति गर्न आवश्यक छ। गर्मी मा, महिला विगतको एयर क्र्याटा बृद्धि गर्न योग्य छन्।
pth culchance विनियोजन शारीरिक नेताहरूसँग सम्बद्ध गर्न सकिन्छ: आन्तरिक जननेयौनाका जीवहरू वा हार्मोनल पृष्ठभूमिमा परिवर्तनहरू। योनी गोप्यमा रक्त स्ट्रिमहरूको उपस्थितिको उपस्थितिका लागि अन्य कारणहरू विचार गर्नु आवश्यक छ, जसले उपचारको आवश्यक पर्दैन र बच्चाको स्वास्थ्यमा र भविष्यमा आमालाई प्रतिबिम्बित गरिदैन।
<< p> लगभग कुनै पनि महिला गर्भावस्थामा गुलाबी डिस्चार्ज देखिन सक्छ। यो ठूलो हर्मोन ओभरलोडहरूको कारणले हो, जुन श्रोणि अंगहरूको स्थान घोषणा गरिएको छ।
धेरै जसो केसहरूमा भ्रुणलाई कुनै खतरा छैन, तर यसलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्न सिफारिस गरिएको छैन।
प्राकृतिक कारणहरू प्रारम्भिक सर्तमा हाइलाइटहरूको कारण: गर्भधारणको एक हप्ता, रगत गर्भावस्था हार्मोनहरूको कम सामग्रीमा संलग्न छ, तर प्रक्रिया ढिला हुन्छ।
प्रोपोजिटरको उत्पादनको कारण योनीको पर्खालहरूमा देखा पर्नेछ, म्कोसाले खुवाउँदछ र क्याभिलियलको संख्या बढ्छ।
कहिलेकाँही रिलीजहरू योनीको पर्खालहरूमा शारीरिक प्रभावको योजनाबद्ध परीक्षा पछि देखा पर्दछ।
प्रोजेक्टेस्टोनको कम सामग्रीको कारण, प्रोसेसिंगको तल्लो सामग्रीको कारण, गर्भाशयको तल्लो भागको कारण, गर्भाशयको सानो अंश अस्वीकार गरियो, सामान्यतया यो बच्चालाई नोक्सान गर्दैन।
ले गर्भवती महिला र भर्या .को स्वास्थ्यलाई धम्की दिंदा सबैभन्दा सामान्य संक्रमित संक्रमण हो। तिनीहरूले योनीको खुरइरहेको, जलाउने र सुख्खा हुन सक्छ। उहि समयमा, सूक्ष्मजीवहरू फलफूल बबल छिटकी छैनन्, तर जेनेरिक गतिविधिको समयमा बच्चा आमाबाट संक्रमित हुन सक्छ।
Cervix को कम खतरनाक क्षति छैन। यो भावनात्मक विकास हुन्छ, तर गर्भावस्था क्षतिको बखत बढ्छ। सबै भन्दा बढी पर्याप्त छ, जसले एक महिलाको लागि गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
<< p> किडनी रोगहरूको लागि र उम्मेदान्तर प्रणाली रक्त एरिथ्रोसाइटहरूमा वृद्धि भएको छ। किनकि शरीरको बोझ बढ्दा धेरै चोटि क्यारियरहरूको भित्ताहरू बृद्धि हुँदैन।
<< p> कुनै पनि राज्यले पेट, स्पेसको तल दुखाइ महसुस गर्दछ, एसस्सको मात्रा र सिक्काहरूको मात्राले बढ्छ, डाक्टरलाई तत्काल पहुँच चाहिन्छ। यी गर्भपात वा स्थिर गर्भावस्थाको पहिलो संकेत हुन सक्छ। एक पूर्ण निरीक्षण र अल्ट्रासाउन्डको सञ्चालन गरेपछि किन गर्भवती महिलाको गुलाबी डिस्चार्ज र अल्ट्रासाउनको सञ्चालन पछि मात्र एक विशेषज्ञ मात्र जान्छ।
plind prinkers गर्भावस्था / H2><< p> के त्यहाँ सामान्य वा यस कारणको प्रारम्भिक अवधिमा पिँस्ने अवधिमा पिन विवाद हुनुहोस्? अवश्य पनि, यसमा डिस्चार्ज प्रयोगको रंगमा परिवर्तन पनि स्वाभाविक छैन - यो स्त्री रोग विशेषज्ञको लागि असाधारण भ्रमणको कारण हो। आखिर, यो आमाको रोग वा गर्भावस्थाको खतराको संकेत हुन सक्छ। तर सबै कुरा क्रम मा छ।
धेरै स्त्रीशास्त्रीहरू भन्छन् कि PAP परीक्षण (त्यो हो, Cervical कोषहरु मा लिइएको atypical कोशिका मा एक साइतालोजिकल स्मीयर वैकल्पिक छ। तर आधुनिक चिकित्सकहरूले अझै यसलाई पारित गर्न सिफारिस गर्छन्, खास गरी यदि यो अध्ययन अर्को -12-12 महिना सकिएन। आखिर, गर्भावस्थाको समयमा गुलाबी रंगको अस्थिर, त्यो हो, रगतको एक प्रशंसाको साथ, ग्रीवा रोगले ग्रर्षूची रोग हो भनेर हो। यदि यो स्मीयर सामान्य छ, तब सबै कुरा फिक्स गर्न योग्य छ। अन्य कारणहरू जुन हल्का गुलाबी महिलाहरू देखा पर्दछन्।
1। माइक्रोफोरा प्रयोगको उल्लंघन, उन्मडिडियासियस। थ्रोसमा, शोकको झिल्ली कमजोर हुन्छ, यसको अखण्डता विचलित हुन्छ, सानो भाँडाहरू फुट्छ। र रक्तको थोपाहरू, योनीको मुकुलसँग पातलो, गर्भावस्थाको प्रारम्भिक अवधिमा फिक्का-गुलाबी विनियोजनहरू हुन्।
2। यौन संक्रमित संक्रमण। विशेष गरी ती लुकेका हुन्: Ureaplasmososososososososososososososososososososososos, chailamiia।
3। मेकानिकल क्षतिको कारण Cervix को erosion। यौन संभोगले शोकको झिल्ली वा cervix मा क्षति पुर्याउन सक्छ। एक्लै बितेर जान्छ। कहिलेकाँही, यदि पहेंलो-गुलाबी एक्लोपनाहरू, डाक्टरहरूले एन्टिसेप्टिक योनि प्रभाव लेख्न सक्दछन्।
4। Polyp ग्रीवा कन्टल। एन्टिमाइक्रोबियल थेरापी नियुक्ति गर्न सकिन्छ। दुर्लभ केसहरूमा, यदि ऊ द्रुत रूपमा बढ्दै छ वा त्यहाँ घातक प्रक्रियाको शंका उत्पन्न हुन्छ, डेलिभरी अघि यसलाई हटाउन निर्णय गर्न सकिन्छ।
त्यसोभए प्रारम्भिक समय गर्भपतनको धम्कीको संकेत हुन सक्छ, त्यसपछि एक प्रमाणपत्रका गोल भएका डाक्टरहरू "चिकित्सा संरक्षण" संरक्षण "तोकिन्छ। यी एन्टिपास आमोटिक्स, शान्ति सहित, सेक्स, र आवश्यक प्रोस्पोंकको तयारी हो। अधिकांश शारीरिक संदर्भीय "उरुजान्टान" मानिन्छ योनी मैनबत्तीको रूपमा।
म "मामा-पिफिटिस्ट" को ख्याल राख्छु। बच्चाले सिक्छ, र राम्रो। घरमा सुन मेडल पहिले नै त्यहाँ छ, धूलो झुण्डिएको छ।
छोरीहरूको टाउकोमा तपाईको दिमागमा अझै इनपुट छैन, त्यसैले तपाईंले कारखाना कन्फिगरेसनसँग गर्नुपर्दछ।
प्रत्येक बैठकको लागि, म नवजात शिशुको खुला आत्माको साथ आउँछु: अन्य जिम्मेवार आमाको ढाँचा, जस्तै तपाईं मार्करियन-मार्टियन "मार्सियाआ मार्दियन" को पाठ्यपुस्तक। एक मूर्ख मा।
अपार्टमेन्टमा हामीले 200 2007 मा फेरि खरीद गर्यौं, उनीहरूले ओभहाल र प्रख्यात थकित हाउसवाहिंग बनाएका थिए। तर दुई छ-मीटर लगियास पतन भएन, पर्याप्त पैसा छैन। र कुनै पनि तरिका हाम्रो साथीले यस्तो वाक्यांश रगड्यो: तपाईंले तुरून्त गर्नुहुने छैन - तपाईं कहिले गर्नुहुने छैन! तसर्थ, अपार्टमेन्टमा साना अभावहरू मैले प्रयास गरें, तर लगिया यति दुःखी भए र छालिएर हामीहरू विगतका मालिकहरूबाट हौं।
<< p> जब तपाइँसँग लामो गर्भवती महिला हिड्नुहुन्छ, सम्पूर्ण विश्व शानदार जस्तो देखिन्छ, र तपाईं यसमा कम्तिमा परी, कल्पित हुनुहुन्छ। यति परी राता। आँखा चमकदार, रहस्यमय, गायन मुस्कुराउनुहोस् ... म गैला को बारे मा बाहिर एक खुट्टा को लागी हुनेछ। र तपाईं पर्खिरहनुभएको छ। र तपाइँले सोच्नुहुन्छ, पार्कको बेन्चमा दोस्रो आइसक्रीमको बारेमा, यसको बारेमा हो! अझै थोरै र यहाँ यो खुशी हो! तपाईं धेरै पढ्नुहुन्छ, तपाईंले सोध्नुभयो, तपाईं सबै कुरा कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। तर समय बित्छ ... र तपाईं बुझ्नुहुन्छ ... यो सत्य होइन! त्यसो भए, म बिल्कुल तयार भएको कुराको सूची तयार छैन।
<< p> मार्चमा, त्यहाँ कार्यक्रममा मेरो सहभागिताको साथ शूटिंग गर्दै थिए "। म यस गियरको बारेमा केहि पनि याद गर्न सक्दिन, त्यहाँ धेरै रमाइलो क्षणहरू थिए। तर सबैभन्दा खराब कुरा केश काट्नु हो। र म अब बस्छु, म आफूलाई ऐनामा हेर्छु र म बुझ्छु मात्र मलाई याद छ।
<< p> पहिलो त्रैमासिकमा, करिब people0% सबै गर्भवती महिलाले यस्तो डिस्चार्जको उपस्थिति नोट गर्दछ।
तिनीहरूको उपस्थितिको लागि मुख्य कारण एक महिलाको प्रजनन अ of ्गहरूको बढ्दो संवेदनशीलता हो, र उनीहरूको रगत बृद्धि भएको छ।
यो किन हो, Intravigigantal अल्ट्रासवाउन्ड पछि, वा हिंसात्मक लिंग पछि, महिलाले गुलाबी छायाको उपस्थिति नोट गर्दछ।
धेरै महिलाहरू, स्थितिमा हुँदा प्रारम्भिक गर्भावस्थाको अवधिमा सिधै गर्भावस्थाको अवधिमा गुलाबी परिणामहरूको उपस्थिति नोट गर्नुहोस् जब उनीहरू पहिले भएको थियो जब उनीहरू पहिले भएको थियो।
यस प्रकारको घटनाहरूको कारण मुख्यतया शरीरमा हार्मोनल पेस्ट्रोकिकाले गर्दा हुन्छ।
एकै समयमा, प्राय: त्यस्ता सेक्सनहरू मासिक धर्मको रूपमा (कम पछाडिको डन्डिंग दुखाइहरू) काटिएको छ।
यसबानीमा, जब ती केटीलाई आउँदै गरेको गर्भावस्थाको बारेमा थाहा छैन, यो मासिक धर्मको लागि लिन्छ।
आदर्श जब सबै हालको गर्भावस्थाको बारेमा उसका प्रश्नहरू विचलित भएको छ भने चिकित्सा सल्लाहलाई जनाउँछ। तर सबैजनाले गरिरहेका छैनन्। धेरै, विशेष गरी दोस्रो र पछिका बच्चाहरु बोक्छन्, तिनीहरूको अनुभव मा विश्वस्त छन् वा भर पर्छ कि सबै कुरा मा निर्भर गर्दछ।
गुलाबी डिस्चार्जको मामलामा अलार्मलाई कुटपिट गर्नु आवश्यक छ जब त्यो भोल्युम यति ठूलो छ कि स्वच्छ गस्केटको प्रतिस्थापन हरेक घण्टा हुन्छ। एक समान लक्षण एक गर्भावस्थाको गर्भपात सुरू वा गर्भावस्था गर्भ को उपस्थिति को लागी पहिलो संकेत हुन सक्छ।
त्यसोभए, प्रारम्भिक गर्भावस्थामा देखा पर्दछ जुन प्रारम्भिक गर्भावस्थामा देखा पर्दछ (1-16-1-16 हप्ता) एक सानो गठन प्लेन्सेन्टाको चिन्ह हुन सक्छ। तिनीहरूमा रक्त रक्त। यस्तो अवस्थामा, एक गर्भवती महिलालाई अस्पताल अस्पताल ल्याउन आवश्यक छ।
यसैले, गुलाबी रंगको स्रावको उपस्थिति डाक्टरलाई अपील गर्ने कारण हो। सबै पछि, केवल एक विशेषज्ञता मात्र सही रूपमा उल्ल .्घनबाट सामान्य भिन्नता, र उपचार रद्द गर्न सक्षम छ। एकै समयमा, गर्भवतीले कुनै तरिकाले आशा राख्नु हुँदैन कि यो पोन्मोसन स्वतन्त्र रूपमा हराउनेछ। यस अवस्थामा, यसले स्वास्थ्यको खतरा पैदा गर्दछ सानो सानो बच्चालाई मात्र होइन, तर आफ्नै पनि।
यो मेरो2गर्भावस्था हो। पहिलोमा कुनै प्रकारको कुनै किसिमको थिएन, लगभग weeks हप्ता त्यहाँ एक पटक एक पटक पलफर डिस्चार्ज थियो, त्यहाँ भिक्षुले valeper को बृद्धि भएको छ, त्यहाँ सामान्य छ। कुनै हेमिताटो छैन, प्लेसेन्टा पछाडि छ। तर चयन जारी रहन्छ ! यस्तो देखिन्छ कि तिनीहरू गुलाबी पाउडर, पानी-मुख्यालयको रंगमा रंगहरू हुन्। पहिले नै 1 15 हप्तामा ..... डाक्टरले भने कि मैनन्ब्रेलहरू लिन जारी राख्दा .... यो सबैले कहाँबाट आयो भनेर आफैलाई थाहा पाउँदैन। यसले मलाई अलि अलि तनाव दिन्छ।
गुलाबी सिस्टलहरू प्राय: फेला पर्दछन्, र डराउँछन्, तिनीहरू प्रायः गर्भपतन खतराको साथ सम्बन्धित हुन्छन्। तर सधैं तिनीहरू वास्तवमै अवस्थित खतराको कुरा गर्दैनन्।
कुनै गुलाबी एक्लोसन यसको रगत प्रवाहको संरचनामा छ, र यसले खास फरक पार्दैन। गुलाबी-सेतो डिस्चार्ज, पहेंलो-गुलाबीहरू यस्तै बन्छन्, किनकि एरिथ्रोसाइटेस्ट्सहरूको मूर्तमा साधारण विनियोजनमा दाग छ।
puin puk विनियोजन गर्भावस्थाको बखत महिलाहरू धेरै कारकहरूसँग सम्बन्धित छन्। जननांग अंगहरूको शोकको झिल्ली गर्भावस्था हार्मोन, र भ्रुणको प्रगतिशील विकासको लागि रूपान्तरणको प्रभावमा छाडा र कमजोर हुन्छ। यौन म्यूकोसाको कुनै पनि माइक्रोरामाबले रक्तस्रावको देखा पर्दछ। त्यसोभए गुलाबी डिस्चार्जको मुख्य कारण रोगविज्ञान होइन, तर भविष्यमा आमाको शरीरमा केवल शारीरिक परिवर्तन।
<< p> प्राय: पहिलो पटकको लागि, भविष्यमा स्त्रीले एक स्त्री रोग विशेषज्ञको लागि योनीबाट गुलाबी डिस्चार्ज देख्छिन्। यसले मिथकको जन्ममा पुर्यायो कि गर्भावस्थाको पहिलो हप्ताहरूमा स्त्री रोग विशेषज्ञको परीक्षा पनि खतरनाक छ। महिलाहरूले परामर्शको भ्रमणलाई जति सक्दो चाँडो, कहिलेकाँही 10-12 हप्तासम्म, कुर्सीमा निरीक्षण गरेपछि गर्भपातदेखि डराउँछन्।
संयोजन र जननाच्रा र जननांग अंगहरुबाट ग्राउन्क्स र योनीको निरीक्षण गर्दा धेरै केसहरूमा मुकुट झिल्ली र स्क्र्याचहरूमा क्षति हुन्छन्, ती दुबै रगत हुन्।
यो सबै खतरनाक छैन र भविष्यको बच्चालाई खतरामा पार्दैन। गुलाबी म्यूकोसा डिस्चार्जहरू यस रगतले चित्रित गरिसकेपछि, र केहि घण्टामा पास गरे।
गुलाबी हाइलाइटहरू र गुलाबी सिलहरू शाब्दिक वाइरिड शाब्दिक जोडीहरूको शाब्दिक जोडीहरूको बीचमा कुनै पनि महिलामा हुन सक्छ, र कुनै पनि रोगशाजी बोल्न सक्दैनन्।
तिनीहरू केवल प्रमाणहरू हुन् कि ओभलेशन भएको छ। Oveulation को बखत, गुलाबी डिस्चार्जहरू रगत एक फुटोलबाट रक्तस्रावबाट रंग दिइयो, र यो सामान्य हो।
मा-Pliculle शेलमा सानो भस्केलर छन्, यो रक्तस्रावमा उनीहरूको क्षति हो, जुन सामान्यतया चाँडै रोकिन्छ।
तथापि, डिस्चार्ज चक्रमा महिलाहरू पनि फरक हुन सक्छन्, र सधैं हानिरहित कारण देखि टाढा।
प्राय: तिनीहरू Cervix को erosion को उपस्थिति मा देखा पर्दछ। यो उनको साथ गर्भवती गर्नको लागि खारेज हुँदैन, किनकि क्षरण संक्रमणको एक स्रोत हो, यसले ओबीपोफियोशालोजीको कारण निम्त्याउन सक्छ। गुलाबी विनियोजन, जसको कारण जो Cervix को erosion, यौन संभोग पछि उठ्नुहोस् र सम्पर्क को प्रकृति हो। तिनीहरू धेरै फरक हुन सक्छन्, रगत सामान्य स्रावमा मिश्रित हुन्छ, र चक्र चरणबाट स्वतन्त्र रूपमा देखा पर्दछ।
तिनीहरूको चरित्र अनुसार, उदाहरणका लागि पृष्ठभूमि रोगहरू वा यौनसलामा समस्याहरूको उपस्थिति, कमिन डिस्चार्ज यौन संपर्तिकको उपस्थितिको बारेमा कुरा गर्न सक्दछ। ओगनिस्ट, पानी गुलाबी उत्सर्जन एन्डोमेटिटाइजलिस सेतो-गुलाबी सेल्सहरूको बारेमा ओर्शीपनको पृष्ठभूमिमा हुन सक्छ।
सामान्यतया, यो बुझ्नु आवश्यक छ कि OVEMALESS कहिले हुन्छ, गुलाबी विनियोजनहरू सामान्य हुन सक्छ। अरू धेरै केसहरूमा, तिनीहरू अलर्ट र डाक्टरलाई भेट्न सावधानी अपनाउनु पर्छ।
चक्रको अन्त्यमा गुलाबी हाइलाइटहरू किन हुन्, यो सुरु हुन्छ, पी - पीएचसीविद्को निरीक्षणमा मात्र स्थापना गर्न सकिन्छ, र कारणहरू हानिकारक नहुन सक्छ।
प्रारम्भिक चरणहरूमा गर्भावस्थाको सुरूवातको सुरूवातबाट prink र allation देखि prink रंगको शुरूआबमा, ढिलाइले अपेक्षित मासिक धर्मको अवधि अघि केही दिनहरू देखा पर्न सक्छ। यस पुरूषलाई सानो पहेलो-गुलाबी, गुलाबी क्रीमरी वा फोहोर-गुलाबी सिलहरू जस्तो देखिन सक्छ, र भ्रुण व्यापकता रक्तस्रावको प्रमाण दिन्छ।
यो सबै महिलाहरूसँग होईन, र यो हुन्छ, किनकि जब गर्भाशयमा भ्रुण डुबाउँदा, साना एन्डोमेट्री भाँडाहरू बिग्रिन्छ। नियमको रूपमा, यो एक-समय गुलाबी विनियोजन हो जुन धेरै घण्टा सम्म आउँदछ। अवधारणा चाँडै रोकियो गुलाबी विनियोजन, र त्यसपछि महिलाले मासिक धर्मको लालसा पत्ता लगाउँदछ।
यदि तपाईंले यस प्रश्नको उत्तरहरू बीच आवश्यक जानकारी फेला पार्नुभएन, वा तपाईंको समस्या प्रस्तुत गर्नु भन्दा थोरै फरक छ भने उही पृष्ठमा डाक्टरलाई थप पृष्ठमा सोध्ने प्रयास गर्नुहोस् मुख्य प्रश्नको विषय। तपाईं नयाँ प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, र केही पछि हाम्रो डाक्टरहरूले यसलाई उत्तर दिनेछन्। यो स्वतन्त्र छ। तपाईं यस पृष्ठमा वा साइट खोज पृष्ठमा समान प्रश्नहरूमा आवश्यक जानकारीको लागि पनि खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंले हामीलाई सामाजिक नेटवर्कहरूमा तपाईंको मित्रहरूलाई सिफारिस गर्नुभयो भने हामी धेरै आभारी हुनेछौं।
medocortal 03on लाइन। CO COSTERS मा डाक्टरहरूको साथ डाक्टरहरूको साथ कार्यगत मोडमा COM ले मेडिकल परामर्श प्रदर्शन गर्दछ। यहाँ तपाइँ तपाइँको क्षेत्र मा वास्तविक चिकित्सकहरु बाट उत्तर प्राप्त गर्नुहुन्छ।
तपाइँ 66 66 दिशामा सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ: एक एल्फेजीलोजिस्टलॉजिलोजिस्ट, जेनेरेटोस्तिक, माननालोजिष्ट, बच्चाहरूको ग्यास्ट्रोफिलोजिष्ट, जीविकाहरू dermatistil, बच्चाहरूको संक्शिसन, बच्चाहरूको कार्डबाजी, बालसाजीविज्ञानी, बच्चाहरूको शल्य चिकित्सक, बच्चाहरूको शल्य चिकित्सक, संक्रामकी, क्लिक्सिलीय, क्लिक्लीयॉजिकल, क्रिक्क्टिडली, क्रिक्क्टिडली, क्रिक्क्टिडसिष्ट, क्लिक्सिस्टी, क्लिक्सिलीय मनोवैज्ञानिक, , भाषण थेरापिस्ट, लौरा, मोमग्रोलोजिस्ट, न्यूरोसाइजिस्टोलोजिस्ट, नेर्सवादोजिस्टिजिलोजिष्ट, रेस्टिस्टियनविज्ञानी, रेडियन डायलोस्टोली, रेडियनविद्दर्जिटी, रेडियनलोजिस्टोस्टोलोजिस्ट , लिस्टलोजिस्ट-मध्यस्थता, दंत चिकित्सक, ट्राइकोलोविज्ञानी, यूरोलोजिस्ट, फार्म Acette, फिर्योयोथेरापिस्ट, फाइटोथेरापिस्ट, फिलिसिआलोजिस्ट, फिथोसियन, शल्य चिकित्सक, एन्डोरोनिनोलोजिस्ट।